जनमतसंग्रह तथा जनअभिमत नेपाल ध्वस्त बनाउने डाईनामाईट हो ! – Himalitimes
जनमतसंग्रह तथा जनअभिमत नेपाल ध्वस्त बनाउने डाईनामाईट हो !
| प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र १४, २०७५
नेपालको ईतिहास मै आजको जस्तो डरलाग्दो तथा भयङ्कर परिस्थिति शायद नेपाल आमाले कहिल्यै भोग्न परेको थिएन होला । त्यस स्थितीको परिकल्पना कमल थापाले लिएको जनमत संग्रह र सीके रावत तथा पीके र केपीबीचको सहमतीबाट उब्जिन लागेको जनअभिमत नै हो । हाम्रो अभियान जहिले पनि पहिला देखि अहिले सम्मै नै जनमत सङ्ग्रह बिषयको बिरूद्वमा नै केन्द्रीकृत छ । आफ्नो बाबु र आमा फलानो हो भनेर जनमत देखाएर नागरिकता लिनु झैं वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थाको बारे जनमत गराउनु हो ।
गिरिजाको कुनियतले गर्दा चालीस लाख भन्दा बढी बहुमतीय भारतीय व्यक्तिले त्यहि चारजनाको सनाखतद्वारा नागरिकता लिएका थिए । यसको ज्वलन्त उदारहण भर्खरै भेटिदै गरेको कैयौं बिवादित नागरिकता नै हो । यदि कमल थापाको मुद्वा जनमत संग्रह गराउनु हो भने अन्ततोगत्वा त्यहि मुद्वा नै नेपाल बिखण्डन गर्ने एउटा बलियो हतियारको रूपमा उदाउने छ ।
देशमा राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य जनताको बलले आफै आउने अबस्था आए बाहिरी शक्तिले कमल थापा मार्फत जनमत संग्रह गराउने माग राख्छ , यो ठोकुवाको साथ भन्न सकिन्छ । जनमत संग्रह नै गरेर भएपनि कमल थापाले लिएको मुद्वालाई स्थापित वा बिस्थापित गर्ने तर्क रहन्छ र जसरी भएपनि यहि मुद्वालाई हावी गरिन्छ । कमल थापा तथा तिनका पार्टीले यसलाई विश्व बिजय प्राप्त गरे झैँ बिजयउत्सव मनाउने छन् । तर यसको घातक पक्षलाई नजरअन्दाज गरिने छ । बिचरा कार्यकर्ताले यति सम्म बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसले बिष्पोटक परिस्थिति जनम्उन सक्नेछ ।
जनमत संग्रहले जीत हार जे भएपनि स्पष्ट रूपले कसको कति मत छ भन्ने विश्वव्यापी छर्लङ्ग पारिदिनेछ । भोलि विदेशीले त्यहि मतलाई खेल खेलाउने बलियो हतियारको रूपमा आफ्नो सेफमा सुरक्षीत राख्नेछ । तत्पश्चात परिस्थिति अनुरूप आफ्नो पक्षमा हुने गरि त्यो हतियार रूपी मतलाई प्रयोग गरिनेछ । यदि हिन्दु राष्ट्र जसलाई हामी वैदिक सनतान हिन्दु अधिराज्य भन्छौं र राजसंस्थाको बारे जनमत संग्रह गराईन्छ भने अब तीन ” के ” को स्वतन्त्र मधेशवाला मुद्वा उठाईनेछ र जनअभिमतको बहस छेडिने छ ।
जनअभिमतको मुद्वालाई अभियानको रूपमा भारतबाट आयतित भएर मधेसी बनेका अंगिकृते नागरिक समक्ष पुराउन पहिलै तयार पारिएको जनमत पार्टीले तिव्र रूपले ब्याक गियर नभएको गाडी अगाडी बढाउने छ । तब पश्चिमाले आफुले तयार पारेको डिजायन अन्तर्गत नेपालमा मधेश राज्य वा नेपालको कश्मिरको मुर्त रूप तयार हुने अवस्था आउने छ । चीनमा माओको समयमा प्रतिक्रान्तिको अवस्था ग्याङ अफ फोरको कारणले बन्यो ।
नेपालमा नेपाली बर्णमालाको पहिलो अक्षर ” क “बाट नामाकरण भएका ग्याङ अफ फोर अथवा केटी सहित केपी , पीके र सीकेको ” जनमत संग्रह ” र ” जनअभिमत “ले नेपाल बिखण्डन गर्ने बहुत कमालको कला देखाउने छ । यता नेपाल आमा र धुरू धुरू रूँदछिन । आफ्ना छोराहरूलाई धिक्कार्ने छन् । आफ्नो कोखलाई चिमाट्ने छन् । आफ्नै कोख नै बिध्वंशकारी परेपछि के गरोस् । तसर्थ सम्पुर्ण देशभक्त तथा राष्ट्रवादी जन समुदाय साँच्चिकै यश धर्ति आमाको कोखमा जन्म लिएको हो भने यसलाई बढो सतर्कताको साथ सोच्न जरूरी छ ।
मनको दैलो उतार्नुहोस् , दिमागको बिर्को खोल्नुहोस् । चेतनाको घैंटो उघार्नुहोस् , सचेत भई यो धर्ति आमालाई साथ चाहिएको बेला कुनै पराया बाबुको पछि लाग्न साटो यश धर्ति आमाको एक मुट्ठी माटो समाई चीत्कार आवाज सुन्नुहोस् र साथ दिनुहोस् । नत्र धिक्कार्ने छ, ईतिहासले र कालो पोत्तिने छ सदैव ।
पश्चिमाले आफ्नो रणनीतिलाई मुर्त रूप दिन विभिन्न मार्ग अपनाईसकेको अवस्था छ । सर्वप्रथम तिनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान ध्वस्त बनाउने कार्य गरे । भाषाको नाममा नेपाली भाषा विरूद्व ,भेषभुषामा राष्ट्रिय पोशाक विरूद्व ,खानामा गाईको मासुलाई बहस बनाएर । प्रतिकमा नेपाली झण्डा फेर्ने प्रपञ्च , मौलिक सभ्यतामा वैदिक सनातन हिन्दु संस्कार बिरूद्व धर्म निरेपेक्ष ,नेपालको बलियो तथा अटल पहिचान राजसंस्था बिरूद्व गणतन्त्र स्थापित गरेर , र अभिवाज्य नेपाल विरूद्व संघियता लागू गरेर र अखण्डता बिरूद्व जनमत संग्रह र जनअभिमतको मुद्वा बोकाएर नेपाललाई हदै सम्म कमजोर बनाईसकेको अवस्था छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नेपाललाई कमजोर बनाउनेको मुख्य उद्वेश्य नै यहाँ अाफ्नो सेना वा गुप्तचर संस्था झारेर दुई विशाल देशको बिचमा बसेर चीन र भारतलाई असन्तुलन बनाएर राख्ने । एशियामा बलियो रूपले उदाईरहेको दुई देश चीन र भारतको मिलीटरी ,आर्थिक विकास ,भौतिक संरचना तथा अन्य देशसँग ती दुई देशको कसिलो कुटनैतिक संबन्धलाई देखेर अत्तालिई रहेको पश्चिमालाई नेपाल एकदमै स्ट्राटजिक प्वाईन्टको रूपमा रहेको छ ।
नेपालका नेताहरूले यो सबै बुझेका पनि छन् तर दलाल, दास तथा कठपुतलीहरूलाई सत्ता र पैसाको लालचले गर्दा अन्धा भई खुरू खुरू मालिकको अादेशलाई पुर्णता दिन लागिरहेका छन् ।
तर सदैव दास र तिनका मालिकको मात्रै जित हुन्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गर्न सकिन्छ । यहाँ साधारण जनताले त यसतो कुराको बिश्लुषण गर्न पोख्त भईसके भने त्यत्रा ठुला राष्ट्रले पक्कै उचित समयलाई नै पर्खेर बसेका होलान् ।
साउथ चाईनामा अमेरिकन पोलिसी जापान र साउथ कोरियाले गर्दा हावी हुन लागेको देखेर हत्तनपत्त चीनले नर्थ कोरियाको पत्ता फालेर अमेरिकन रणनितीलाई अलमल्लमा राख्यो । भारतको सम्बन्ध अमेरिका भन्दा रूससँग छ । भारतको मिलिटरिको सामर्थ्य नै रसियाको मिलिटरि हातहतियार हार्डवेयर , मिलिटरि हातहतियार सफ्टवेयर , हातहतियार , युद्व विमान , युद्व पोत ,मिसाईल टेक्नोलोजी ,गोला बारूद आदिमा अाश्रीत छ ।
भारतको नब्बे प्रतिशत मिलिटरि सिस्टम रसिया बिना अपाङ्ग हुन्छ । उसले रसियासँग सम्बन्ध अझै मजवुत बनाउन अमेरिकासँग सम्बन्ध बिस्तार गरेको नाटक गर्यो । केही यूद्व विमान र केही मिलिटरि टेक्नोलोजी सम्बन्धि पनि सम्झौता गर्यो तर उत्ति नै खेर रसियासँग ठूलो मात्रमा हातहतियार तथा टेक्नोलोजी भित्रायो । फेरि यता अमेरिका र ईरानको बिग्रिएको सम्बन्धलाई नी मध्य नजर गर्दै आफुमा ध्यान केन्द्रीकृत गरेको थियो । तर भारत ईरानसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन किनभने भारतले सबै भन्दा सस्तोमा ईरानबाट कच्चा तेल भित्राउने गर्छ ।
देश विकास , भौतिक संरचना बिकास र औध्योगिक विकास र यातायताको लागि भारतलाई अध्यातिक मात्रामा तेल अायात गर्नु पर्ने अवस्था छ भने ईरान उसलाई संसारकै सस्तोमा र कच्चा तेल दिंदैछ । भारत र चीनको सम्बन्ध कसैले जसो मुल्यांकन गरेता पनि दुई देश बिच संसारकै ठूलो अायात तथा निर्यात हुने गर्दछ । अझ चीनले त संसारमै गरेको ईन्भेष्टमेन्टमा भारतमा सबै भन्दा बढि गरेको देखियो भने भारतले चीनलाई अाफ्नो देशमा लगानी गर्न अझ उत्साहित गरेको देखिएको छ ।
अझ चीन भारतमा हुन गईरहेको चुनावलाई अाफ्नो लगानीको रणनिती बनाई बसेको छ । त्यस्तै नेपालको मामलामा ईतिहासमै हेर्ने हो भने एउटै रणनिती बनाउने तर्खरमा छ । अझ भनौ पश्चिमाको डरलाग्दो रणनितीलाई छिचोल्न बिश्वमा नै अब चीन , भारत , रसिया तथा ईरान एक ठाउँमा उभिन पर्ने बाध्यता आईलाग्छ ।
पुर्व माननीय तथा राज्यमन्त्री सम्मानिय विराज बिष्टले भन्नू भए झैँ त्यो त्यहि अोली हो जसले नागरिकता विधेयकलाई परास्त गर्नुपर्छ भने । तपाईहरू एक ढिक्का भएर बस्नुहोस् म सहयोग गर्छु भनेर सत्ता पक्ष भएता पनि नागरिकता विधेयकमा करिव दस जना साँसद कमल थापा बिरूद्व अाएपछि ढाडस दिने विपक्षका नेता अोली हाल अाएर त्यहि नागरिकता बिधेयक पास गर्न लागेपछि पुर्व मन्त्री बिराज प्रतिप्रश्न गर्छन् , होईन त्यो सत्ताको कुर्सिमा के छ हँ ?
तर यथार्थता भनेको जनअभिमतलाई बल पुर्याउने र अन्ततोगत्वा अंगिकृतद्वारा नेपालको एक भागलाई मधेश कश्मिर बनाउने पश्चिमाको प्रपञ्च हो । त्यो नेपाल अामालाई क्यान्सरबाट संकृमित भएर काट्नु पर्ने अबस्थाको भागले नेपाललाई मात्रै होईन स्वयम् भारतलाई नै संकृमित बनाउँछ भन्ने कुरा आज भारतले बुझिसकेको अवस्था छ । तसर्थ त सीकेलाई ठूलो थ्रेट छ भनेर पीके र केपीले भारतको नजरबाट बचाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
यता चीन घेर्ने रणनीति अनुरूप पश्चिमाले हाल आएर आफ्नो बाप्टिस्ट गरे देखिको बल लगाएको छ । उसले कम्युनिस्ट बिचार धारा भएता पनि दुई धार बनाएर बसेको पार्टिलाई बाम गठबन्धनको नाममा एक ठाउँमा ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउन सफल भए । पहिला उसले नर्थ कोरियाबाट खेदिएका गुप्तचर पृष्ठभूमि भएका डा. मुन प्रयोग गरि दोस्रो चोटि नेपाल सरकारको अाथित्यमा धर्म परिवर्तनको खाका बोकेको एशिया प्याशिफिक समिट गराए ।
लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अमेरिका उडाएर ऐतिहासिक सम्झौता गरायौं भन्ने भान पारे नेपालीमा तर यसको भित्री रहस्य अमेरिकन सिअाईएलाई १८० दिन अन अराईभल भिषा उपलव्ध गर्नु थियो पर्यटकको नाममा , दोस्रो नेपाललाई एशिया प्यासिफिकमा नेतृत्वमा ल्याउने काम भयो । जसको उधेश्य नै नेपालको सत्ताधारीशरूलाई जालमा पार्नु थियो । यता शाही शासनमा रोकिएको मिलिटरि सहयोग अमेरिकाले नेपाललाई दिने सम्झौता गर्यो ।
अमेरिकाले यसकै बहानामा चीनको बोर्डर नजिक नेपाली सेनासंग संयुक्त अभ्यास गर्न सफल भए । हुनत तत्कालीन समयमा आधुनिक हातहतियारबाट सुसज्जित चीन विरूद्वको खम्पा बिद्रोह नेपालीको सुझबुझले नियन्त्रण र निर्मुल पारेको थियो । तत्पश्चात माथिल्लो मुस्ताङ चीनको संबेदनसिललाई ध्यानमा राखेर बिदेशीको लागि रोक लगाएको थियो भने त्यो स्थानमा नेपाली दलाल सरकारले अमेरिकन सेनालाई खुल्लमखुल्ला छोड्नु भनेको चीनलाई चिढाउनु हो ।
यस किसिमको विभिन्न नेपालको कृयाकलापलाई चीनले पनि सूक्ष्म रूपले नियालिरहेको अबश्य छ , सायद चीन पनि उचित मौका ताकेर बसेको छ । चीनले पनि बुझेको छ ,अमेरिकाले नेपाली सेना र गुप्तचरमा अाफुलाई स्स्थागत गर्न सहयोगको राशी मा भारि बृद्वि गर्दैछ भनेर ।
नेपाललाई कमजोर पार्न यी दुई महत्त्वपूर्ण तत्व हो जसलाई बिस्तार उसले आफ्नो चंगुलमा ल्याउँदै छ । नेपालमा न्यायलय पार्टीको मान्छे भर्ती गरेर ध्वस्त बनाईसक्यो भने गुप्तचर संस्था २०४६ साल पछि रोयल ईन्टिलिजेन्स व्युरोलाई बिघटन गरेर र गुप्तचर बिभागमा पार्टिका मान्छे भर्ति गरेर भईसक्यो ।
तर ओली निन्द्रामा बर्बराको झैँ दिउँसै अन्ट सन्ट बोलेको देख्दा अब चांडै गणतन्त्र ओरालो लाग्दै छ । यो ठोकुवा गर्न सकिन्छ । कहिले बिखण्डनवादीलाई काखा तथा भ्रष्टाचार बिरूद्व आवाज उठाउने , राष्ट्र हितको कुरा गर्नेलाई पाखा र विप्लपलाई प्रतिबन्ध र आनन्दले जनता सामु घुमिरहेका तथा मन्दिर गएका राजालाई नजरबन्द गर्ने हास्यास्पद कुराले ओलीको सपना भताभुङ्ग हुँदैछ भन्न सकिन्छ ।
यो देश बचाउन छ भने हामीले राजा महेन्द्रको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अवलम्बन गर्न जरूरी छ । सबै छरिएर बसेका र छरपस्ट अवस्थामा रहेका जनतालाई राष्ट्र हितको लागि एक ठाउँमा ल्याउन राजाको सकृयताको आवश्यकता छ । सकृय राजा भन्नाले बुझ्नेले जसरी बुझे पनि हुन्छ र अर्थाए पनि हुन्छ । तर नेपालको परिबेशमा जब जब देश र जनताले दुख पाए , देश अनियन्त्रित न लाग्यो , देशमा अत्याचार , व्यभिचार बढ्न लाग्यो , नितीगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुन लाग्यो , देश एकीकृत गर्न पर्यो , देशलाई स्वतन्त्रता दिलाउन पर्यो तब तब राजा तथा राजसंस्थाको सदस्यले सकृय भुमिका निभाएका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका भाईहरू , बहादुर शाह , राज्यलक्ष्मी शाह , त्रिभुवन शाह , महेन्द्र शाह आदि ले देशको गिर्दो अबस्थालाई बुझेर नै सबृय भुमिका निभाएका छन् । हामी यो भन्दैनौ राजाले लौरो लिएर सडकमा आन्दोलन गरोस् तर देशको जनतालाई अभिवाज्य नेपाल सदैव रहोस् भन्ने हेतु , अत्याचारको विरूद्व , नितिगत भ्रष्टाचार विरूद्व , देश बिखण्डनबाट बचाउन हेतु , अपराधिकरण विरूद्व , माफिया तन्त्र विरूद्व , छिमेकि देशलाई स्थायित्व राख्न , बिदेशी परराष्ट्र नीति असंलग्न स्थापित गर्न , नेपाललाई पुर्ण स्वतन्त्रता राख्न र नेपाललाई अक्षुण्ण राख्न पक्कै पनि जनतालाई साथ दिन आग्रह गर्न पर्दछ ।
यो देश मेरो पनि हो मेरो पनि तिमीहरू जनताको जतिकै देशको रक्षार्थ हेतु कर्तव्य रहन्छ र यसको लागि मैले केगर्न पर्छ साथ दिन तयार छु ,भन्न आवश्यकता भईसक्यो । यो देशको पहिचान सदैव उँचो राख्ने हो भने हाम्रो मौलिक सभ्यता , राष्ट्रिय पहिचान लाई सुरक्षार्थ गर्न आवश्यक छ । राष्ट्र , राष्ट्रियता , स्वाधिनता र पुर्ण स्वतन्त्रता राख्ने हो भने हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दु संस्कार सहितको अधिराज्यको फेरि परिकल्पना गर्न आवश्यबता भईसक्यो ।
जनमत संग्रह र जनअभिमतको मुद्वाले देश विखण्डनबाट हुनबाट बचाउन र देशको रक्षार्थ र सुरक्षार्थ देश र जनतालाई राजसंस्थाको अत्यावश्यक छ र जनतालाई राजसंस्था र राजसंस्थालाई जनताको आवश्यक भएको हुनाले अब राजा जनता नै सकृय हुन आबश्यक छ । तसर्थ देश र जनता दुबैले राजाको नेतृत्व खोजेको छ । सकृय रूप भन्नाले लौरो लिएर होईन कि देशको आबश्यकतालाई मनन गर्दै शीरमा श्रीपेच , राजगद्दी र हातमा राज दण्डको कल्पना गरिएको मात्र हो ।
अमेरिकाले बेला न कुबेला भेनुजुएलाको पक्षमा प्रचण्डलाई बोल्न लगाएको त प्रचण्डलाई थर्काएर अमेरिका भ्रमणमा लग्न रहेछ भन्ने प्रमाणित भईसक्यो । उनलाई अमेरिका लाग्नुको मुख्य तात्पर्य भनेको सिआईएको डिजायनमा उनलाई अड्काउनु हो । उनी त्यता लगेर प्रचण्डको पत्नीको उपचारार्थ धन्दा पनि सिआईएको ओखती प्रचण्डलाई दिएर पठाउनु थियो । अब उनी मार्फत नेपालमा चीन र भारत विरूद्व केहि न केही मुद्वा आउँछ ।
बलियो सम्भावनामा उनलाई अबको प्रधानमन्त्रीमा उभ्याईन्छ र त्यहि पात्रद्वारा ठूलो उत्पात मचाईन्छ । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न लेनिन बिष्टलाई युरोपमा उनको विरूद्व उजुरी हाल्न पठाईसकेको अबस्था छ । उनीद्वारा आफ्नो कार्य फत्ते भए ठिकै भयो नत्र उनी सिधै हेगमा बाल सैनिक प्रयोगमा फस्ने छन् ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र १४, २०७५ 8:39:33 AM |
Prevलगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी बढाइयो सुरक्षा सतर्कता
Nextमृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्छन् कर्मचारी